Microstation-Bentley - Bogga 2 - Geofumadas
Siemens iyo Bentley Systems waxay xoojiyaan isbahaysiga istaraatiijiga ah iyo dadaallada wadajirka maalgashiga
Isku-darka cusub ee la bixinayo ayaa ka faa'iideysanaya Teamcenter iyo jawiga xogta isku xiran ee Bentley si loo kordhiyo wax soo saarka dhirta, loo dardar-galiyo gaarsiinta, iyo kharashyada oo hooseeya. Istaraatiijiyada hal-abuurka dhijitaalka ah ee dhamaadka-dhamaadka waxay abuurtaa mataano dhijitaal ah oo dhameystiran oo sax ah geeddi-socodka iyo dhirta jireed si loo maareeyo kakanaanta oo loo ekeysiiyo ...
Sanadka Bentley Systems Shirka Shirarka Abaabulka iyo Abaalmarinta waxaa lagu qaban doonaa London
Shirka sanadlaha ah wuxuu kulmiyaa hoggaamiyeyaasha adduunka ee Kaabayaasha, Naqshadeynta, Dhismaha iyo Hawlgallada si ay u bartaan hababka ugu wanaagsan ee ay u noqdaan takhasus dhab ah oo dijitaal ah. EXTON, Pennsylvania - Maarso 20, 2018 - Bentley Systems Incorporated, oo ah shirkad caalami ah oo horseed u ah xallinta barnaamijyo dhammaystiran oo loogu talagalay horumarinta kaabayaasha, ...
Bentley Systems waxay ballaarisaa naqshadeynta iyo dukumiintiyada ay ku bixiyaan dhismayaasha la taaban karo iyada oo loo marayo helitaanka S-Cube Futuretech
Awoodaha Horumarineed ee Cusub ee Falanqaynta la taaban karo ee qaabdhismeedka, Naqshadeynta iyo Xalalka Dukumiintiyada Bentley Systems, Incorporated ayaa maanta shaaca ka qaaday inay la wareegayaan naqshadeynta dhismaha shubka ku saleysan ee Mumbai iyo barnaamijka dukumiintiyada ee S-Cube Futuretech Pvt. Ltd. Codsiyada S-Cube Futuretech waxay Ku Ballaarineysaa Bentley Bixinta Gaarka ah With
Abaalmarinta "Oscar of Kaabayaasha" waxay noqon doontaa Singapore
Bentley Systems ayaa ku dhawaaqday baaqa loogu talagalay soo gudbinta mashruuca ee Abaalmarinta Nolol dhiirrigelin ah ee loogu talagalay Horumarinta BIM ee Kaabayaasha Dhaqaalaha. Iyada oo diirada la saarayo horumarka laga gaadhay istaandarka BIM, Bentley Systems waxay damacsan tahay inay dhigto baaqeeda sanadaha soo socda ee Bariga Fog; si sax ah sannadkan mid ka mid ah magaalooyinka kuwaas oo moodel ...
Nidaamka Bentley - SIEMENS: istiraatiijiyad loogu talagalay internetka waxyaabaha
Bentley Systems wuxuu ku dhashay ganacsi qoys, waqtigaas oo ahaa 80-meeyadii markii hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed ay ka faa'iideysatay mabaadi'daas lagu helay qarankii Mareykanka, halkaasoo ay kaga duwan tahay waddamada kale: aragtida, dadaal adag iyo in la sameeyo waxa saxda ah ayaa ugu dhow dammaanadaha guusha. Wadamada leh macnaha isbaanishka, boqolkiiba sare ee ganacsiyada qoyska ...
Bentley Systems dhawaaqday finalka la waxyoonay 2016
Iyadoo la tixgelinayo mashaariicda hal-abuurnimada u leh adeegsiga teknoolojiyada loo adeegsado naqshadeynta, dhismaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha, bishii Oktoobar abaalmarinta 2016 waxaa lagu qaban doonaa magaalada London oo loo yaqaan 'In Inspired', oo la soo saaray tan iyo 2004, oo loo yaqaan waqtigaas waqti BeAwards. Ku guuleystayaasha waxaa dooran doona xeerbeegti ...
BIM - Adduunkii aan ku riyoon lahaa 20 sano ka hor
20 sano ka dib, waxaan kaliya la xiriiri karaa BIM sidii isbeddelka ay u matalaysay waqtigaas, anigoo ka tagaya sabuuradda sawirada iyo baafinta warqadaha faylasha CAD. Taasi waxay ahayd isbeddel layaableh, iyadoo la tixgelinayo inuu ka yimid farshaxan naqshadeeye iyo xisaabiyaha buugga xisaabiye + kalkuleyl + Lotus 123.
Featured, Engineering, Microstation-Bentley, egeomates My
Galitaanka Oracle Spatial ee BentleyMap
Waxyaabaha soo socdaa ayaa tusaale u ah howlaha la qaban karo iyadoo la adeegsanayo Microstation BentleyMap si loo maareeyo macluumaadka laga helo keydka xogta OracleSpatial. Ku rakib Macaamiisha Oracle Looma baahna in Oracle lagu rakibo kombiyuutarka. Kaliya Macmiilka, kiiskan waxaan isticmaalayaa 11g R2. Si ka duwan markii loo adeegsaday Microsation Geographics, ...
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ... Page 15 page Next